casino endri-tsoratry ny mandika sy mametaka
casino tia du lac wi
ny taona hamerana ny casino in florida
ny taona hamerana ny casino in california
Tsy U casino foliatti guadeloupe kitapo asa. Ny fitambaran'ny winnings dia $37,516.
Amin'ny sehatry ny mpilalao fa mitovy ny mini Firenena Mikambana, izany no zavatra tsara izao Tontolo izao Andian-Poker haino aman-jery tale Maria Dalla efa niasa tao amin'ny U casino endri-tsoratry ny mandika sy mametaka. Zanak'ondry, 26, izay fahatelo ao amin'ny chip manisa, efa za-draharaha iray amin'ireo tsara indrindra mitantana mandrakizay amin'ny mpilalao ao amin'ny lalao. Milalao andro sy andro izany nandritra ny andro maromaro, ary heveriko fa inona no nanjo ahy casino tia du lac wi. Lauderdale, Fla., 19.7 tapitrisa ao amin'ny poti-7 – Pius Heinz, 22, Alemaina, 22, 16.425 tapitrisa ao amin'ny poti-8 – Anton Makiievskyi, 21, avy any Okraina, 13.925 tapitrisa ao amin'ny poti-9 – Samoela Holden, 22, ny United Kingdom, 12.375 tapitrisa ao amin'ny poti-Jaona Hewitt Costa Rica, ny faha-10 sady farany mpilalao esorina avy ny Tena zava-Nitranga ny talata alina, nahazo $607,882 ny taona hamerana ny casino in florida. Collins, 26, izay tohanan'ny sahiran-tsaina ireo mpanohana azy, izay natao teo ny fahadimy tao amin'ny chip count raha Giannetti dia fahasivy.
Samoela Holden, 22, ny United Kingdom, milalao ihany koa ny voalohany eran-Tany Andian-Poker, dia amin'ny fahavalo toerana. Khoa Nguyen ny Kanada no nihintsana tamin'ny faha-11 toerana ary nahazo $607,882, sy ny Afrikana Tatsimo Konstantinos Mamaliadis nivoaka ny fifaninanana eo amin'ny faha-13-toerana, ny fitadiavam-bola $478,174.
Jaona Hewitt Costa Rica, 23 taona, dia eo amin'ny toerana fahefatra ny taona hamerana ny casino in california. Lenaghan, 26, dia diso fanantenana tsy tonga ny farany ambony latabatra, fa olo-malaza izy, dia mahatsapa tsara ao ny andro vitsivitsy.